စိုးလွင် ● ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ဘ၀လမ်းများ (၈၈ .. | MoeMaKa Burmese News & Media
စိုးလွင် ● ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ဘ၀လမ်းများ (၈၈ ..
၁၉၈၈ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံနောက်ပိုင်းကာလ စစ်အာဏရှင်စနစ် အဆုံးတိုင်ပျက်သုဉ်းချုပ်ငြိမ်းရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြ တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (မ.က.ဒ.တ) ရဲ့ တော်လှန်ရေးခရီးလမ်းတလျှောက် ကျနော်ပါဝင်ခဲ့ရာ (၁၉၈၈-၁၉၉၄) ကာလ ကိုယ်တွေ့ကြုံဆုံခဲ့ရမှုများ ကို ကျနော်နဲ့အတူ သက်စွန့်ဆံဖျားတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ ရဲဘော်သူငယ်ချင်းများအား အမှတ်ရဂုဏ်ပြုခြင်းအဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ နောင် မြန်မာ့လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းက လူငယ်မျိုးဆက်သစ်များ သိရှိလေ့လာနိုင်ရန်အတွက်သော်လည်းကောင်း.. မိုးမခ၊ သစ်ခက်သံလွင်တို့မှတဆင့် ရေးသားတင်ဆက်လိုက်ပါသည်။
(ဒါတောင် ဗိုလ်လေတိုက ပြောသေးတယ်…သူက အင်္ဂလိပ်ပေးတဲ့ သင်တန်းဆင်းတဲ့)
ဒါဆို ပထမဆုံးသေသင့်သည်မှာ ကျနော်….။
ဒါနဲ့ ရှေ့ခရီးမဆက်ခင်မှာ သူ့ကိုအပြီးသတ်မှာရပြီး…ငါ ရှေ့ကသွားမယ်။ မတော်လို့တိုက်ပွဲ့ဖြစ်ခဲ့ရင်…
(၂) ငါ ဒဏ်ရာရလို့ မပြေးနိုင်ခဲ့ရင် မင်းကို ငါ ကာပစ်ပစ်ထားပေးမယ် မင်းပြေးပေတော့ (သံယောဇဉ်တွယ်ရင် နှစ်ယောက်လုံး သေမှာ)…
အံ့သြစရာကောင်းတာက အဲဒီအချိန်တုန်းက စိတ်လုံးဝမလှုပ်ရှားဘဲ တည်ငြိမ်စွာလှုပ်ရှားခဲ့တာပဲ။ ထွက်လာပြီး မိနစ်၂၀ အလောက်အကြာမှာ ကျနော်အရှေ့ခပ်လှမ်းလှမ်းက လူရိပ်မြင်လိုက် လို့ အောင်စိုးထွေးကို အချက်ပြလိုက်တာနဲ့ သူလည်း သစ်ပင်အကွယ်မှာ နေရာယူ လိုက်တယ်။ ကျနော်လည်း ကျောက်နံရံဘေးမှာ ကပ်နေလိုက်တယ်။ ရှေ့ကလာနေတဲ့သူလည်း ကျနော့်နားရောက်ရော.. သူ့ရဲ့လည်ပင်းကို ဘယ်လက်နဲ့ဖက် ညာလက်ကသေနတ်နဲ့ သူ့နားထင်ကို ထောက် ထားလိုက် တယ်. ပြီးတော့ ကရင်ဘာသာစကားနဲ့ ကျိုးဖိုး ကျိုးဖိုး(ဗမာလို့ပြောရင် ကျောင်းသား) လို့ ပြော…ကိုယ်ကလည်း ကရင်စကား ဒီလောက်ပဲရတော့ ကိုယ့်ထက်ပိုပြောတတ်တဲ့ အောင်စိုးထွေးကို လှမ်းခေါ်ပြီး ပြောခိုင်းရသေး တယ်. အောင်စိုးထွေး ရှင်းပြနေတဲ့ချိန်မှာ ကိုယ်ကလည်း အင်္ကျီလက်မောင်း တံဆိပ်ကိုပြပြီး ကျောင်း သားဖြစ်ကြောင်းပြောရ သေးတယ်။ ဒီက ရင်က ပထမတော့ ရုန်းတာပေါ့။ ကျနော်ကလည်း မလွတ်တမ်း ဖက်ထား၊ အောင်စိုးထွေးက ရှင်းပြနဲ့မှ ငြိမ်သွားတယ်။
သူကဆင့် KNU နောက်တဖွဲ့နဲ့တွေ့ပြန်…။ ဒီတခါတော့မဆိုးဘူး…သူတို့က အကူညီပေးတယ်..။ ရှေ့ဆက် သွားရင် နွားလေးခိုရောက်မယ်။ ကင်းသမားကို စက်နဲ့လှမ်းပြောထားပေးမယ်လို့ ပြောတယ်..။ သူတို့က လှမ်းပြောထားပေးမယ်ပြောပေမယ့်လည်း ကိုယ်တွေကတော့ သတိနဲ့ သွားရတာပဲ..။ တချက်မှားရင် အသက်ထွက်သွားမှာကိုး..။
ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ထဲ ဒီလမ်းကိုဖြတ်လာတာ KNU တွေက အံ့သြနေကြတယ်…။ သတ္တိရှိတယ်လို့များ တွေးနေကြမလာ..မိုက်ရှုးရဲတယ်လို့ တွေးနေကြမလားမသိ…။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် ဘေးမထိရန်မခဘဲ လိုရာပန်းတိုင်ရောက်လာရတာကိုပဲ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်နေမိတယ်..
ကျနော်တို့ နွားလေးခိုရောက်တော့ ကျနော်တို့အဖွဲ့တွေ တခြားနေရာရောက်နေလို့ မတွေ့ရ ဘူး။ နှစ်ရက်လောက်နေတော့မှ ဗိုလ်တနဲ့အတူ ပြန်ရောက်လာကြတယ်။ ကျနော်ကိုတွေ့တော့ ဗိုလ်တခင်ဗျာ သူ့စကားနားမထောင်ရကောင်းလာဆိုပြီး တဖျစ်တောက်တောက်နဲ့…။ သူ့စေတနာကို နားလည်ပေမဲ့ ကိုယ်တွေက သေနတ်ကိုင်ပြီး ပုန်းမနေနိုင်ဘူးလေ..